Soomaaliya, 06 March 2018
Talaado 6 March 2018
Muqdisho: Koox Mataleysa Dugsiga Dhagoolayaasha oo Tartan Ka Qeyb Galaya
Iyadoo toddobaadkii tagay, saddexdii bishan dunida laga xusay maalinta maqalka ama dhagoolayaasha dunida ayaa koox matalaysa dugsiga u gaarka ah dadka dhagoolayaasha ah, waxey ka qeyb galayaan tartan kubadda cagta ah oo ay ku loolamayaan 32 kooxood oo kala matalaya dugsiyada degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Hay'ado Ku Baaqay in Soomaaliya Laga Cafiyo Deymaha
In ka badan 30 ka mid ah hey’adaha gargaarka caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen Isniintii shalay, ka hor shirka London ee gar-gaarka bini'aadannimo waxay ku baaqeen in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay.
Soomaaliya oo Heshiisyo Dhinaca Beeraha La Gashay Turkiga iyo Masar
Wasaaradda beeraha Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed laga gashay dowladaha Turkiga iyo Masar.
Madaxweyne Farmaajo oo Booqdey Xarrumo Ciidan
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kor meerey xeryaha ciidamad xoogga dalka ee ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho, halkaas oo uu kula hadlay qaar ka mid ah ciidamada ku jiray xeryahaas. Caasho Ibraahim Aaden ayaa faahfaahineysa.
Guddi: 656 Qof Ayaa ku Dhimatay Qaraxyadii Soobbe iyo Naasa Hablood 2
Waxaa korortey tirada dadkii ku dhintey qaraxii ka dhacay agagaarka Zope ee magaalada Muqdisho, bishii Oktoobar ee sanadkii 2017-ka.
Wareysi: Xaaladda Degmada Balcad
Maleeshiyada ururka Al-Shabab ayaa maalintii Jimcihii soo weeraray magaalada Balcad oo in muddo ah xasilloonayd, nabadna haysatay, waxaana ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada ka hor intii aysan ka saarin ciidamada dawladdu.
Md. Waare oo u Tacsiyeeyey AMISOM
Mas’uuliyiinta Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ku wareejiyay hub ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka soo badbaadiyeen weerar gaadmo ah oo Jimcihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ku qaadeen kolonyo saad u siddey ciidamada AMISOM duleedka magaalada Balcad, dhimashana ay ka dhalatay.
Maxaabiis Hindiya Laga Keenay oo Muqdisho Gaaray
Qaybtii labaad ee maxaabiis Soomaali ah oo horey ugu xirnaa dalka Hindya ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Muqdishu.
Somaliland oo Difaacdey Heshiiska Ber-bera
Maamulka Somaliland, ayaa difaacay heshiiskii dekadda Berbera ee dhawaantan lagu soo saxiixay dalka Iskutagga Imaaradka Carabta.
Dhimsita Ciidanka AMISOM oo laga Digay
Shanta wadan ee Bariga Africa ee ku deeqay ciidanka AMISOM ee jooga Soomaaliya ayaa ugu baaqay Qaramada Midoobay in dib loo eego qorshaha ah in ciidanka AMISOM si tartiib tartiib ah looga saaro Soomaaliya.
Madasha Dhallinyarada: Qeybta 2-aad ee Wareysiga Fannaan Cabdi Baaddil
Ku soo dhawadaad dhageystayaal Barnaamijka Madasha Dhallinyarada ee VOA. Toddobaadkan waxa barnaamijka marti ku ah fannaanka Cabdi Baaddil Ibraahim, oo ka mid ahaa fannaaniintii ugu caansaneyd Soomaaliya.